Puntland:ma ogolin in la qaado cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya
Home Somali News Puntland Puntland:ma ogolin in la qaado cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Dhagayso
Puntland:ma ogolin in la qaado cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Dhagayso
Maamul goboleedka Puntlan ee Soomaaliya ayaa maanta sheegay ineey diidanyihiin, in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, iyagoo sheegay in hub badan uu Soomaaliya yaalo loona baahanyahay in hubkaasi dhimis lagu sameeyo.
Maamulka Puntland, ayaa sheegay inaaneey hatan habooneyn in hubka uu gacanta u galo, wax ay ku tilmaamen koox kaliya, oo leh damac siyaasadeed.
Golaha amaanka ee QM ayaa la filayaa inuu go’aan kasoo saaro maalinta beri ah ee Arbacada ah cunawabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, iyadoo lahadal haayo, in goluhu uu mudo sanad ah qaadi doono cuna qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Kadib kulan ay manta golaha wasiirada Puntland yeesheen ayay ku sheegeen ineey kasoo horjeedaan in la qaado xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya, sidaana waxa warbaahinta usheegay Maxamuud Caydiid Dirir, oo ah wasiirka warfaafinta Puntland.
Halkaan ka dhagayso wareysiga wasiirka warfaafinta Puntland:https://midnimo.comm/wp-content/uploads/2013/03/warbixinta-puntland.mp3
“Awood milatari horaa dalka uga soo daalay, in la qaado xayiraadaha hubkana waxaa doonaya qolo damac siyaasadeed leh, arin hada loo baahanyahayna maahan, waxaana loobaahanyahay in shacabka lugu sameeyo hub kadhigis….” Ayuu yiri Maxamuud Caydiid Dirir.
Arimaha ugu weyn ee ay doowlada Federaalka ku dalbatay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran, waxaa kamid ah in la tayeeyo Ciidanka qaranka Soomaaliya, iyo dagaal ay sheegeen ineey kula jiraan kooxaha argagixisada, laakiin Puntland ayaa taas diidan.
Wasiirka wafraafinta Puntland ayaa sidoo kale sheegay in madaxda doowlada Federaalka ay dhinac marayaan dastuurka dalka u dagsan, gaar ahaan ku dhaqankiisa.
Doowlada Federaalka ayaa in badan ku dadaaleeysay sidii cunaqabateynta hubka looga qaadi lahaa Soomaaliya, iyagoo sheegay ineey keeni kartoq aadista xayiraadahaasi tayenta ciidan qaran oo awood leh.